भाइ'रल जोडी पुजाको माइतबाट खुल्यो अर्को र'हस्य , फुपू र बुबाले भक्का'निदै गरे सबैको मन रु'वाउने कुरा (भिडियो सहित) - Nepali news..
भाइ’रल जोडी पुजाको माइतबाट खुल्यो अर्को र’हस्य , फुपू र बुबाले भक्का’निदै गरे सबैको मन रु’वाउने कुरा (भिडियो सहित)
भाइरल जोडी पुजाको माइत बाट खुल्यो अर्को रहस्य , फुपू र बुबाले भक्कानिदै गरे सबैको मन रुवाउने कुरा (भिडियो सहित)
झापा । अहिलेको भाइरल बिषय ६७ बर्षिय बृद्ध र २१ बर्षिय पुजाको बिबाहको कुरा छ । इलामको चुलाचुलीमा भेटिएका हजुरवुवा र नातिनीको जस्तो उमेर अन्तर भएका श्रीमान् श्रीमती पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल जोडीका रुपमा परिचित छन् ।
चुलाचुली गाउँपालिका ३ का ६७ बर्षीय सिंहप्रसाद लिम्बू र २१ बर्षीया पूजा लिम्बूले विवाह गरेपछि यतिबेला भाइरल बनेका हुन् । शारीरिक रुपमा अंपाङ्ग रहेकी पूजा र बृद्ध अवस्थामा पुगेका सिंहप्रसाद लिम्बूको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । उनको टाउको लुकाउने एउटा गतिलो घरसमेत छैन ।
साना साना नाति नातिना र वृद्ध मात्रै बस्ने घरमा बिजोक नै थियो भन्छन वृद्ध । उता युबतीको पनि पहिले नै एकजना युवकसँग बिहे भएको र उसले छाडेर गएपछी बेसाहारा भएकी युवती जसको एउटा हात नै छैन ।
हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन । घरको अवस्था धेरै नै बिजोक रहेको छ ।पुजाको पुर्ब श्रीमान बाट जन्मिएको बच्चा पनि छ । पुजाको माइतको अवस्था कस्तो छ ? अनि के भन्नुहुन्छ त पुजाको बुबा ममी ?
तल भिडियोमा हेर्नुहोला ..
यो पनि.. भाइर’ल पुजाको छोरा स्कुलमा यस्तो अवस्थामा भे’टिए , शिक्षकले गरे सबैको मन रुवाउ’ने कुरा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापा, दमक । इलामको चुलाचुलीमा भेटिएका हजुरवुवा र नातिनीको जस्तो उमेर अन्तर भएका श्रीमान् श्रीमती पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल जोडीका रुपमा परिचित छन् ।चुलाचुली गाउँपालिका ३ का ६७ बर्षीय सिंहप्रसाद लिम्बू र २१ बर्षीया पूजा लिम्बूले विवाह गरेपछि यतिबेला भाइरल बनेका हुन् ।
शारीरिक रुपमा अंपाङ्ग रहेकी पूजा र बृद्ध अवस्थामा पुगेका सिंहप्रसाद लिम्बूको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । उनको टाउको लुकाउने एउटा गतिलो घरसमेत छैन । साना साना नाति नातिना र वृद्ध मात्रै बस्ने घरमा बिजोक नै थियो भन्छन वृद्ध ।
हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन ।घरको अवस्था धेरै नै बिजोक रहेको छ । अहिले ६७ बर्षिय बाजेको जेठो छोरा बिरामी भएर बिर अस्पतालमा राखिएको छ ।
यो पनि.. हेर्नुस भाइरल जोडी पुजाको ५ बर्षको छोरा , बिचरा ! भक्कानिदै भने आमा बुबा दुवैले छोडेर गए (भिडियो सहित)
यो पनि हेर्नुहोस्… भाइ’रल जोडीलाई भेट्न पुगे युवा ने’ता पुन्य गौतम, ६७ बर्षे बाजेको कुरा सुन्दा पुन्य च’कित (भिडियो सहित)
झापा । इलामको चुलाचुलीमा भेटिएका हजुरवुवा र नातिनीको जस्तो उमेर अन्तर भएका श्रीमान् श्रीमती पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल जोडीका रुपमा परिचित छन् ।
चुलाचुली गाउँपालिका ३ का ६७ बर्षीय सिंहप्रसाद लिम्बू र २१ बर्षीया पूजा लिम्बूले विवाह गरेपछि यतिबेला भाइरल बनेका हुन् । शारीरिक रुपमा अंपाङ्ग रहेकी पूजा र बृद्ध अवस्थामा पुगेका सिंहप्रसाद लिम्बूको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ।
उनको टाउको लुकाउने एउटा गतिलो घरसमेत छैन । साना साना नाति नातिना र वृद्ध मात्रै बस्ने घरमा बिजोक नै थियो भन्छन वृद्ध ।
उता युबतीको पनि पहिले नै एकजना युवकसँग बिहे भएको र उसले छाडेर गएपछी बेसाहारा भएकी युवती जसको एउटा हात नै छैन । हात नभएपछि कसैले बिहे नगर्ने र बिहे भएपछी पनि आफुसङ नबस्ने भएपछी उनले वृद्धसंग बिबाह गरेको बताइन ।
घरको अवस्था धेरै नै बिजोक रहेको छ । अहिले ६७ बर्षिय बाजेको जेठो छोरा बिरामी भएर बिर अस्पतालमा राखिएको छ । उनीहरुले आफ्नो छोरालाई उपचार गर्न सबैलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सहयोगका लागि ९८११३५६३७४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
एक्कासी भाइरल जोडीले उस्तै कपडा लगाएर मिडियामा आए , उनीहरु २ बीच हुन्छन यस्ता शर्तका कुराहरु (भिडियो सहित)
Prevचर्चित र्‍यापर भिटेनको नयाँ गीत यु’ट्यु’ब ट्रेण्डि’ङ्गको पहिलो स्थानमा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextयि हुन ६ जिल्लामा खटा’इएका महिला सिडि’ओ , जाे पुरूष भन्दा अब्ब’ल मानिन्छन -हेर्नुहोस्..
यो कस्तो अचम्म ! १६ वर्षे युवतीको पेटमा १२ वर्षे बालकको गर्भ
कृष्ण र रुपा जस्तै मायालु जोडी विक्रम र मनु। पूरै सरीर नै नच*ल्ने विक्रम-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित
पैसा तिर्न नसक्दा सुत्के’री महिला विराटनगर अस्पता’लमै बन्दी.श्रीमान डिस्चार्ज गर्न भि’ख माग्दै…
२५ वर्ष लामो वैवाहिक सम्वन्ध बारे भावुक हुदै रवी लामिछानेले भने,- “सबैको भाग्यमा माया र परिवार सुख लेखेको नहुने रहेछ”-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित)